Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo dib ugu soo noqday Garoowe kana hadlay arrimo badan | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo dib ugu soo noqday Garoowe kana hadlay arrimo badan
GAROOWE – Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta dib ugu soo noqday magaalada Garoowe kaddib safar qaatay muddo laba todobaad ah oo ugu maqnaa dalalka Shiinaha,Itoobiya iyo dalka Kenya.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalalkaas uu tanga kulamo kula soo qaatay qaar kamid ah mas’uuliyiinta dalalkaas ,safiiro iyo shirkaddo dhanka maalgashiga ah.
Madaxweynaha oo maanta gaaray magaalada Garoowe ayaa waxaa kusoo dhaweeyey mas’uuliyiin ka tirsan labada golle ee dowladda,saraakiil ka tirsan Madaxtooyada,saraakiisha amniga iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Dr Cabdiweli Gaas oo Saxaafadda kula hadlay Madaxtooyada ayaa ka warbixiyey socdaalkiisii uu ugu maqnaa dalka dibadiisa ,arrimaha doorashada Soomaaliya ,doorashada aqalka hoose ee Baarlamaanka,abaaraha iyo hawlgalkii dib loogu qabsaday degmada Qandala.
Madaxweynaha ayaa sheegay in magaalada Nairobi uu kulan kula qaatay Safiirka dalka Jarmalka uuna kala hadlay mashaariicda ay ka caawinayaan Puntland oo ay kamid tahay mashruuca dhismaha wadada Gaalkacyo iyo Garoowe kaasoo uu sheegay in wajigiisii 1aad uu dhawaan bilaabanayo.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Safiirka dalka Hindiya uu kala hadlay baahiyaha dhinaca Waxbarashada ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay doorashada Aqalka hoose ee Baarlamaanka Federaalka oo dib uga bilaabatay magaalada Garoowe ,wuxuuna taageeray go’aankii guddiga doorashada ay ku asteeyeen qoondada Haweenka ee Aqalka hoose.
Waxaan maqlayay dad oronaya gabdho ma rabno, waxay ila tahay waxaasi wax la aqbali karo ma ah, gabdhuhu dadkay ka mid yihiin, 50% dadka Puntland waa gabadho, xaqoodana lama inkiri karo, ciddii isku daydana, kama yeelayno”ayuu yiri
Madaxweynaha Puntland mar uu ka hadlayey muranka ka taagan xubnaha aqalka sare ee gobolada Waqooyi ,wuxuu sheegay in qaabka loo wahay arrintaas aysan marnaba sax ahayn.
Haddii kuraastu (aqalka sare) ay dirta waqooyi leedahay ha la siiyo, oo ha lagu dhawaaqo, marna inay yiraahdaan sool, Sanaag iyo Cayn Somaliland ayay ka mid tahay, marna yiraahdaan Dirta waqooyi ayaa qaadanaysa, iyagaa laga rabaa inay is waafajiyaan””ayuu yiri
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland si dhab ah uga qeybqaadaneyso Doorashada madaxtinimada Soomaaliya isla markaana uu dalku u baahan yahay Isbadel.
Mar uu ka hadlaayey Abaaraha saameeyey dhamaan gobolada Puntland ,wuxuu sheegay in dalka Shiinaha uu kasoo helay riig ceelaha qoda loona baahan yahay in dalka ka baxo baahida dhinaca Biyaha.
Madaxweynaha Puntland oo ugu danbeyn ka hadlay hawlgalkii dib loogu qabsaday Qandala ayaa amaan iyo hambalyeyn u diray ciidamada Puntland ee hawlgalkaas ka qeybqaatay,wuxuuna u rajeeyey caafimaad askartii ku dhaawacantay dagaalkaas.